China Ibhotile yeglasi engamanzi engamanzi engamanzi engamanzi iibhotile zeSiseko mveliso kunye nabathengisi | Jiamei
Umgangatho ophezulu weglasi engabonakali yeglasi yeDropper Liquid Foundation iibhotile
Isikhundla: 20ml, 30ml, 40ml
Iibhotile zeSiseko seGlasi esiLuhlaza esilahliweyo
isilika screen, bexhentsa eshushu, frosting, ileyibhile, umbala yoshicilelo，ukuhombisa ukudubula kunye nezinye iinkqubo
Ukufezekisa iSiseko soTywala
Square iibhotile ulwelo ngaphaya elubala zenziwe ngeglasi ekumgangatho ophezulu, olugqibeleleyo ukhuselo lokusingqongileyo, kwaye ngokuhambelana nemigangatho yobulunga kazwelonke. Ihamba ne-dropper, kwaye zininzi iintlobo ezahlukeneyo ze-gel entloko. Unokukhetha ngokokhetho lwakho, qhagamshelana neenkcukacha zabathengi. Umlomo webhotile usebenzisa uyilo lomsonto kunye nomlomo woxinzelelo wokuthintela ukuvuza kolwelo. Ezantsi kwebhotile kuyilelwe kwisakhelo se-concave kunye ne-convex yoyilo lwe-anti-skid, ukutyeba emazantsi ebhotile. Yeyona ndlela ilungileyo yokubamba iiserum, izixhobo zokucoca izandla, into yokuthambisa, njl
Ukucaciswa kweebhotile zesiseko seplanti ebonakalayo zi-20ml, 30ml kunye ne-40ml.Ungakhetha imigaqo ngokweemfuno zakho. Inkampani yethu inesikrini sesilika, ukunyathela okushushu, iqabaka, ileyibhile, umbala wokuprinta, ukuhombisa ngokudubula kunye nezinye iinkqubo. Siza kukopa umfanekiso owunike ngokugqibeleleyo ukuqinisekisa ukoneliseka Sinenani elikhulu lendawo elinde ukulungiswa kwesiko lakho.
Ukuba ufuna, sinokubonelela ngesampulu kuwe ukuze uqinisekise isitayile sokugqibela. Ngenxa yokuba sinesikrini esishicilelayo, isitampu esishushu, iqabaka, ileyibhile, umbala wokuprinta kunye nezinye iinkqubo, ukuze sikwazi ukwenza ngokwezifiso amagama ahlukeneyo kunye neepateni kuwe.Sicela uqhakamshelane nenkonzo yabathengi malunga neenkcukacha. Emva koko, uhlawula idipozithi, kwaye siya kuvelisa imveliso ngobuninzi ngokwesampulu. Okokugqibela, imveliso iyathunyelwa kuwe kwaye ihanjiswe ibhalansi emva kwentlawulo yakho.
Ukuba unayo nayiphi na imibuzo ongathanda ukubuza kuyo, ungaqhagamshelana nabasebenzi beenkonzo zethu, baya kukuphendula. Siya kukukhonza ngentliziyo epheleleyo kwaye sinethemba lokufikelela kwintsebenziswano emnandi kunye nawe.
Egqithileyo Umgangatho ophezulu wesikwere esenziwe ngebhotile yeglasi yesiseko seebhotile esisezantsi
Okulandelayo: Ihowuliseyili Luxury Flat kwamagxa Essence Glass iibhotile engenanto